Isicatshulwa esiya kwiNtetho (i-TTS) kunye neehologrikhi ezifana ne-Microsoft Hololens 2: UMartin Vrijland
Isicatshulwa esiya kwiNtetho (i-TTS) kunye neehologramu ezinjengempilo eneMicrosoft Hololens 2
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-27 Septemba 2019	• 4 Comments
Uninzi lusenokuba nokuthandabuza umbono wokuba singaphila kwihlabathi eliqinisekileyo kwikamva. Apho sisebenzisa iindlela zethu zokungenisa i-bandwidth ecothayo yeengqondo zethu, ezinje ngamehlo, iindlebe, impumlo, ulwimi, uchuku kunye nokunye okunje, i-BCI (Brain Computer Interface) evela kwi-Neuralink (enye yeenkampani zika-Elon Musk) sele sele ise-2020 ukukwazi ukubonelela ngentsebenziswano ekhawulezileyo nengqondo. Masinyaniseke; thatha indlebe, umzekelo. I-eardrum kufuneka iguqule isandi sibe kukudonsa ngombane kwaye nengqondo kufuneka iguqule loo nto ibe sisandi ngendlela, umzekelo, isicatshulwa okanye umculo. Ke ikhona inguqulelo phakathi. Ibali elithethiweyo malize ngegama okanye incwadi ifundwe ngegama ngalinye. Kuya kuba lula ngakumbi ukuba ungalayisha lonke incwadi kwi1x kwingqondo. Sihamba phambili kwicala lokuphuhliswa kwe-BCI.
NgeMicorsoft Hololens 2 kusafuneka ukuba iprojekram njengenyaniso eqinisekisiweyo kwisithuba. Nge-BCI ungabeka umboniso obonakalayo ngokuthe ngqo kwiziko elibonakalayo lengqondo. Konke-kuyo yonke, konke kubonakala kunomdla kakhulu (jonga ividiyo engezantsi). Nangona kunjalo, asiyonto kuthi kwixesha elifutshane silindile.
Jonga umboniso we-Neuralink ka-Elon Musk ngezantsi kwaye ufunde inkcazo yam eneenkcukacha eli nqaku (kwaye ufunde ngakumbi phantsi kwevidiyo).
Ukanti uphuhliso olunje ngeMicrosoft Hololens 2 sele iluncedo ekuphuhlisweni kwenkqubo apho udala indawo yedijithali apho wonke umntu ebona into enye okanye ihypram efanayo kwindawo efanayo, kodwa ukusuka kwindawo yokujonga eyahlukileyo. UGoogle uphuhlise Itekhnoloji ye-Anchor yefu kwaye isicwangciso kukuhambisa imephu yehlabathi liphela ukuze ukwazi ukwenza iiprojukthi ezitratweni ezibonakalayo kuwo wonke umntu; kwindawo enye, kodwa ukusuka kwikona eyahlukileyo. Ke unganakho nokuhamba nedinosaur esitratweni esiya kubona wonke umntu. I-Neuralink BCI evela kwi-Elon Musk ide yenze ukuba iphunga isilwanyana kwi-2020, kuba eli phunga linokubekwa kwiziko lephunga lobuchopho. Yonke imifanekiso oyibonayo okanye yonke into oyibonayo esiyenzayo ngemihlaba yethu (amehlo, iindlebe, impumlo, njl. Njl.) Inokuguqulelwa kwisibonakude se-electromagnetic. Into eyoyikisayo efunekayo yi-bandwidth efanelekileyo kunye nedatha echanekileyo evela kulo mbala nangokuthi uxhumano lwe-neuro kufuneka luqikelelwe kwingqondo.
Kutheni ndikunika olunye ujonge kuphuhliso lwetekhnoloji? Kuba ke unokuwaqonda amanqaku am malunga nenyani yokwenyani kunye nobunye bungcono kancinci. Uya kufumana la manqaku ngezantsi into yemenyu. Yam incwadi entsha Ndicacisa ukuba kutheni olu lwazi lubaluleke kangaka. Uya kufumana incasa kumanqaku phantsi kwento ekhankanyiweyo yemenyu.
Ngaba sinokulawula isigqibo salesi simiso?
Mamela uElon Musk inkcazo yekusasa elikufutshane apho sithandwa khona
UMicrosoft Hololens 2 unomdla wento enokwenzeka nge-intanethi yoxhumo lobuchopho
Ngaba u-Elon Musk unalo ubudlelwane nomntu we-transgender? Fundisisa umculo wale Grimes apha
5G kunye nokuthunyelwa komntu
tags: 2, zonyuswa, Elon, eziziimbalasane, Hololens, Microsoft, Musk, Neuralink, inyaniso, ukulinganisa, enembonakalo yenyani
28 Septemba 2019 kwi-07: 06
Ukuphupha ngale nto sinokulindela ukuhlaselwa okumangalisayo kwabafokazi, ngakumbi xa kunikwa ingxelo zakutsha nje kwi-MSM, kukho uMfazwe omtsha wehlabathi oya kuphuma, umzekelo.
Ngaba ikhadi lokugqibela liza ngokwenene, ngubani owaziyo. UWerner von Braun ubonakala ukuba wayithethile ngokwenenekazi. Amagunya athe amisela yonke le projekthi yokuchaza ngobuninzi bebhombu.
Ukuhamba ngesikhephe ezulwini kuyinto yomoya phakathi kwabo, le nto siyibona ngasentla yile bafuna ukuyibona, ndicinga ukuba banokwazi amaxesha amaninzi, siza kuyibona.
28 Septemba 2019 kwi-17: 18
Andinakulinda, itray ye Belgian yeebhiya yase-Belgian sele ifikile. USerge Monast uxele le nto phakathi kwiminyaka 'ye-90 ngento awayeyibiza ngokuba yiprojekthi yeebhulukhwe eluhlaza .. siyakwazi ukubona umahluko weklasikhi ye-TR-3B. Ndizibonile ezininzi ngekhamera yam yasebusuku, ezinye zinkulu njenge-2-3 yebhola ekhatywayo..esiseko seNATO kubonakala ngathi siyathandwa.
Isitulo sokugoba sele silungile…
29 Septemba 2019 kwi-19: 55
I-HAARP kunye noLawulo lweNgqondo-ziNqaku nje
1 Oktobha 2019 kwi-09: 59
« UPopu uFrancis ubiza iinkokheli zehlabathi kwiVietnam kwi14 ngoMeyi 2020 ngepact yomhlaba
Abagxeki bakaGreta Thunberg ngaba baziphethe kakuhle ngokwesini ukuba bangaziphathi kakuhle izinto zobuntwana ': ukuphela kwesizathu »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.090.419